टिकटकमा भाईरल ‘सारीवालि’: भिडियो बनाउनका लागि किनिन् १५० सारी ! – Dainik Samchar
टिकटकमा भाईरल ‘सारीवालि’: भिडियो बनाउनका लागि किनिन् १५० सारी !
August 23, 2021 358
टिकटकबाट अभिनय, नृत्य र अन्य बिधामा आफ्नो भविष्य खोज्नेहरु धेरै छन् ।कतिले टिकटकबाटै उठेर आफ्नो सपना पुरा गर्दै जीवन स्तर उकासिसकेका छन् भने कति अझै त्यो सपना पुरा गर्न टिकटकमा स्तरिय प्रस्तुतिहरु दिन तल्लिन छन् ।
बिकृतिहरु आफ्नो ठाउँमा छन्, अर्को तर्फ राम्रा प्रस्तुतिहरु दिदै सबैलाई मनोरन्जन दिनेहरुको पनि कमि छैन, टिकटकमा । यस्तैमा बुटवलकी गोमा ज्ञावाली अर्को राम्रो टिकटक प्रयोगकर्ताको नाम हो । गोमा अघिल्लो लकडाउन यता टिकटकमा सक्रिय छिन् ।
सारी लगाएर टिकटकमा नाच्दै सबैको मन जितेकी गोमालाई धेरैले सारीवाली पनि भन्छन् ।बुटवलकी गोमालाई सानै देखि नृत्यमा रुचि थियो तर उनी आफुलाई नृत्यमा पारँगत भने मान्दिनन् । व्यवसायको रुपमा उनको सारी पसल पनि छ ।परिवारको सपोर्टमा
टिकटकमा पनि अघि बढिरहेकी गोमा आफ्नो पसलमा आएका सारीहरु मनपर्यो भने आफै राख्ने पनि गर्छिन् । उनीसँग १५० माथि सारीहरु छन् । छोटा कपडा लाएर टिकटक बनाउनेहरुलाई चुनौती दिदै गोमा सारीमा सजिदै टिकटकमा आफ्नो प्रस्तुति दिदै अघि बढिरहेकी छिन् ।
हालसम्म उनलाई ६ लाख माथिले फलो गरिसहेका छन् । धेरैले उनलाई हिरोईन जस्तै राम्री भन्छन् भने उनको हाँसो मनपर्ने पनि बताउँछन् । जे होस् उनले छोटो समयमा नै टिकटकमा भाइरल बनिरहेकी छन् ।
Prevदेशभरि सार्वजनिक विदा
Nextहार्दिक श्रद्धाञ्जली ! बखतेलाई सम्झिदै काजि यसरी रुन थाले ,धोका दियौ शम्भु (हेर्नुस् भिडियो )
२०२२ मा आमा बन्दै यी अभिनेत्रीहरू
बालेन्द्र साहले ल्याए २७ हजार मत, १४ हजारसहित केशव स्थापित पछ्याउँदै
रमा घिमिरेः जो यो संसारमा छैनन् केवल छन् त उनका यादहरू…. (भिडियो)
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (17223)
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ? (8396)
बालेनको चर्चित चस्मा : बजारमा उच्च माग, कति पर्छ मूल्य ? (8101)
चितवनमा एमालेले लियो अग्रता, गठबन्धनलाई पछि पार्यो (7859)
पुन्य गौतमले, बालेन शाह अमिरिकन एजेन्ट भएको खुलासा गरे, देखाए यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित) (7221)